काठमाडौं, १० माघ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आममाफी नदिने बताए । बिहीबार प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रले यस्तो बोलेपछि शुक्रबारै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलेशान्ति प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्न सक्ने बाटोमा ओली हिंडेको भाषण गरे । त्यो पनि सार्वजनिक मञ्चमा विशाल जनसभाको माध्यमबाट ।
प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितताको लागि पार्टी एकता गरेका केपी ओली जनयुद्धप्रति कत्ति पनि सकरात्मक नभएको प्रचण्डले दावी गरे । उनले सहिदहरुको कार्यक्रममा ओली कहिले पनि सहभागी नभएको स्मरण पनि गरे ।
केही समयअघि सडक आन्दोलनमा उत्रिनेहरुलाई तह लगाउने भ्याक्सिन आफूसँग रहेको बोलेका थिए । ओली निकटका नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रचण्ड र माधव नेपाल जेल पर्नसक्ने भाषणबाजी गरिरहेका छन् ।
यी सबै कुराहरु संयोग मात्रै भने होइनन् । ओली समूहको क्रियाकलापले हिजो जनयुद्ध गर्ने र जनआन्दोलन गर्ने शक्तिहरुलाई एउटै कित्तामा उभ्याउने वातावरण बनाएको छ । माधव नेपाल शान्ति सम्झौताका पहलकर्ता नै हुन् । पूर्वएमालेको आधाभन्दा ठूलो हिस्सा संसद विघटनलाई संविधान विघटनको सुरुवात भन्दै आन्दोलनको पक्षमा देखिएको छ र उक्त पार्टी काँक्रो चिरिएजस्तै फुटिसकेको छ ।
पूर्वमाओवादीको केही नेताहरु ओली पक्षमा देखिएका छन् । प्रत्यक्ष लाभको पदमा गएर ओली समूहमा गएको स्पष्ट देखिएकै छ ।
ओलीको कदमको पक्षमा राजतन्त्रको वकालत गरेको कमल थापाको पार्टी राप्रपा देखिएको छ । कतिपय एजेन्डामा ओली नेतृत्वको समूह र राप्रपाबीच समानता पनि देखिएको छ ।
उता ओली सरकारको क्रियाकलापबाट आशंका बढेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईबीच छलफल भएको छ । प्रचण्ड र डा. भट्टराईबीच लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको निवासमा शुक्रबार साँझ भेटवार्ता भएको हो ।
भेटमा उनीहरूबीच संयुक्त संघर्ष गर्ने विषयमा आधा घण्टाभन्दा बढी समय छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि अहिले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी तथा नागरिक समाजलगायत विभिन्न संघ/संगठन एक्लाएक्लै आन्दोलन गरिरहेका छन् । सो आन्दोलनमा कसरी मिलेर अघि बढ्ने त्यसै विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
उनीहरुको मत ओलीलाई हटाउने विषयमा मिलेको छ । संयुक्त आन्दोलनबिना ओलीविरुद्धको लडाई जित्न नसकिने उनीहरुको बुझाई पनि समान रहेको छ ।
शुक्रबार भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अहिले प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक आफ्नो र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने बेला आएको छ । यसै क्रममा मैले ओली प्रतिगमनविरूद्ध संयुक्त जनआन्दोलन निर्माण गर्ने प्रयासस्वरूप पूर्वप्रम र दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, प्रचण्डलगायत अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरेको हुँ। गर्दैरहनेछु ।’
त्यस्तै भट्टराईले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध संयुक्त संघर्षको खाँचो भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ ओलीप्रतिगमन विरूद्ध नेका, प्रचण्ड-माधव नेकपा र जसपाका एक्लाएक्लै जनप्रदर्शन राम्रै देखिएका छन्।तर आ-आफ्ना ऐनामा हेरेर मक्ख नपरौं ! आम जनताको वितृष्णा,भूराजनीतिक जटिलता र प्रतिगमनकारीको भित्रीबाहिरी सेटिङलाई कम नआँकौँ। एक्लाएक्लै खाल्डामा जाकिने कि संयुक्त संघर्षको डुंगा चढ्ने ? सोचौं ।’
भट्टराई र प्रचण्डबीको भेटघाटको स्थल उपराष्ट्रपति निवास हुनुलाई पनि अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
उता ओलीको कदमले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसमा पनि यसको तीव्र प्रभाव देखिएको छ । देउवा समूह इतरका शक्तिले कांग्रेसमा देउवालाई ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा सहभागी हुन दबाव दिइरहेको छ ।
ओलीसँग गठबन्धन गर्न नहुने र दाहाल-नेपाल समूहसँग गठबन्धन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसका संस्थापनइतर नेताहरुको जोड रहेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कुनै पनि सिद्धान्त र तर्कले ओलीसँग मिल्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
उता देउवा भने विभिन्न तर्क गर्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी नबनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । उनीमाथि ओली प्रतिगमनको मतियार बनेको र सहयोग गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।